Taphattoonni 3 Ballon d'Or’ 2014 injifachuu malan beekaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Taphattoonni 3 Ballon d’Or’ 2014 injifachuu malan beekaman
Taphattoonni 3 Ballon d’Or’ 2014 injifachuu malan beekaman
Addunyaa ispoortii keessatti, keessumattuu ganda kubbaa miillaatti, oduun oo’ituu tarii mi’ooftuun tibbanaa eenyutu ‘Ballon d’Or’ FIFA bara 2014 injifata kan jedhu. Tarree dheeraan gara jalqabaatti bahee ture calalamee amma maqaa namoota 3 qofa kan galmee irratti hafe- Kiristiyaanoo Ronaaldoo, Li’ooneel Mesii fi Maanu’eel Nuweer. Isaan keessa isaa tokko jechuudha kan bara kana Ballon d’Or harkatti galfachuuf deemu.
Maqaan Ronaaldoo fi Mesii erga woggaa woggaan dorgommii kanaan wolqabatee ka’uu eegalee bubbule. Lamaan isaanii badhaasa kana wolitti daddarbaa, wolitti dabarsaati kan as gahan. Egaa Maanu’eel Nuweer kan akka haarawaatti barana as bahe. Baranas, akka taajjabdootaatti, badhaasichi jarreenuma lamaan bira dabra wonti jedhu heddus hinjiru.
Maanu’eel Nuweer kilabii isaaf (Baayer Muniik) waan dansaa hojjate, Bundasliigaa injifate. San bira ce’ee gareen biyyoolessa Jarmanii geebba addunyaa akka argatuuf gumaacha guddaa laateera. Hojii isaa kana egaa Mesiifi Ronaaldoo fundura akka dhaabatu kan isa dandeessise. Maanu’eel Nuweer yeroo jalqabaatiif kan maqaan isaa galmee nama sadii irra taa’e. Badhaasa kana argata taanaan erga bara 1963 as goolii eegaa isa jalqabaa (seenaa keessatti ammo isa lammataa) ta’uuf deema jechuudha kan injifannoo kana goonfate.
Ronaaldoon dorgomaa cimaa ta’ee kan dhihaateef cimina garee Riyaal Maadriid keessatti argisiiseen. Ronaaldoon Maadriid Shaampiyoonaa Awurooppaa akka injifatu godhuun alatti bara tokko keessatti shaampiyoonaa kana irratti goolii 17 laakkofsiisuudhaan rikoordii haarawa galmeesseera. Maadrii geeba nugusichaas injifachuun isaa ni yaadatama. Ronaaldoon bara kana injifate taanaan badhaasa kana yeroo 3ffaa f injifachuu isaati.
Mesiin bara kanatti sochii cimaa godhaa ture. Barceeloonaan 3ffaa ta’ee La Liigaa akka xumuru godheera. Goolii heddu galchuudhaanis rikoordii haarawa heddu La Liigaa keessatti galmeessiseera. Biyyi isaa Argeentiinaan Gebba Addunyaa irratti heddu funduratti deemuudhaan sadarkaa 2fffaan woldorgommii xumute. Kana hunda keessatti dirqamni Mesiin bahaa ture waan laayyo hinturre.
Eenyu Ballon d’Or’ FIFA bara 2014 akka injifatu ammatti eenyuu hinbeeku. Tilmaamuun, wolmormuun oo’ee itti fufeera, garuu. Ronaaldoon yeroo 2ffaaf wolitti aansee injifachuun isaa kan hinoolle ta’uu keessa beektonni kan odeessan. Dhuma isaa beekuuf hanga sagantaa Zuurikitti Amajjii 12, 2015 geggeeffamuuutti obsaan eeguuf dirqamna.
‘Ballon d'Or’ FIFA bara 2014
Previous articleDhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan
Next articleSooranni naannoo Mediteraaniyaanii umrii namaa dheeressuu danda’a jedhame